China API 11AX Ball na oche maka Subsurface Rod Pump Pump Manufacture and Factory | N & D Na-eme Ihe
* API kwadoro ụlọ ọrụ
A na-eme valvụ mgbapụta na bọọlụ na oche ma ha bụ isi ihe dị mkpa mgbe ị na-arụ ọrụ n'okpuru nrụgide hydraulic dị elu n'ihi omimi. Naanị imewe zuru oke na nhọrọ ziri ezi nke ihe nwere ike ịkwado ndụ ọrụ ha.
A na-eji bọọlụ valvụ na oche oche eme ihe n'ọtụtụ ebe na mmanụ, arụmọrụ ha na-emetụta mmetụta ojiji na ndụ ọrụ nke nfuli ozugbo. A na-anwale nchikota bọl na oche ọ bụla iji hụ na e nwetara akara zuru oke n'ọnọdụ niile nke kọntaktị.
Tungsten carbide bọl & oche, mere site na-amaghị nwoke ngwaọrụ, nwere nnukwu ekweghị ekwe, na-eyi-eguzogide, corrosion-eguzogide, na-eguzogide ekwe. Anyị nwere ike ịnye bọọlụ Carbide n'ọtụtụ nkọwapụta chọrọ dị iche iche gụnyere TC Cobalt, TC Nickel na TC Titanium, na TC Bọọlụ arụpụtara dịka ụkpụrụ ISO na Anti-Friction Bearing Manufacturer Association (AFMBA) si dị.
A ga-eji bọlbụ na carbide valve bọl na oche mee ihe ebe ọ bụla na valvụ unidirectional na-adọkpụ na ụdị dị iche iche na-agba mmanụ mmanụ n'ihi oke ike ha, iyi na mmebi mmebi yana ezigbo mgbochi mkpakọ na ihe odide dị egwu nke nwere akwa ihe mgbapụta na mgbapụta mgbapụta ogologo iji bulie ájá, gas na wax nke nwere oke mmanụ site na olulu mmiri.
Enwere ike ịnweta bọọlụ na bọọlụ gwụchara. Standard na-abụghị ọkọlọtọ bọọlụ dị.
Ihe ngwugwu API maka bọl na oche
Egwuregwu API na Ogwe oche
Anyị na-enye gị valvụ bọl na oche tupu ire ọrụ, mgbe-ire ọrụ nke gụnyere ahịa nduzi, ọmụma ọkọnọ & oru nkwado, oru ịbịaru ọkọnọ, mmepụta atụmatụ nye, mmepụta oge nye, mmepụta nkwado na akwụkwọ enye.
Nke gara aga: Tungsten Carbide Bush maka Igwe mgbapụta Ọdụdọ
Osote: Choke azuokokoosisi na oche